QORSHE MAALIYEED VS LATALIYAHA MAALIYADA: KALA DUWAN
Bogga ugu weyn QORSHE MAALIYEED VS LA-TALIYAHA MAALIYADA: WAA MAXAY Farqiga 2022?
QORSHE MAALIYEED VS LA-TALIYAHA MAALIYADA: WAA MAXAY Farqiga 2022?
Awood la'aanta in la ogaado farqiga u dhexeeya qorsheeye maaliyadeed vs lataliye ayaa ka dhigtay dad badan inay ku jahwareeraan midba midka kale. Si kastaba ha ahaatee, waxaad baran doontaa farqiga u dhexeeya qorsheeye maaliyadeed iyo lataliye markaad wax akhrido.
Qorsheeyaha maaliyadeed iyo lataliyaha maaliyadeed waa xirfado kala duwan oo mararka qaarkood waxaan u isticmaalnaa xaalad khaldan.
Waxyaabaha ay wadaagaan labada xirfadle ayaa ah inay halkaas u joogaan inay ka caawiyaan macaamiishooda noloshooda maaliyadeed.
La-taliyaha maaliyadeed ayaa in badan diiradda saara maalgashiga iyo maareynta hantida halka qorsheeye maaliyadeed uu la shaqeeyo nolosha maaliyadeed ee guud ee macmiilka.
Sharaxaada degdega ah ee labada xirfadood ayaa ah in qorsheeye maaliyadeed uu yahay lataliye dhaqaale oo naxariis leh laakiin sidaas maaha lataliyaha maaliyadeed.
Adeegyada ay bixiyaan xirfadlayaashan ayaa mar uun is-dul-saaran macnaha inaad heli karto la-taliyayaal maaliyadeed oo iyaguna bixiya adeegyada qorsheynta maaliyadda.
Farqi kale oo cad ayaa ah in la-taliyaha maaliyadeed uu isu dheellitiro maalgashiga iyo qorsheynta maaliyadeed laakiin qorsheeye maaliyadeed ayaa ah mid yar ama aan ahayn maskax maal-gashi.
Tani waxay ahayd inay mar hore ku siiso aragti. Haddaba, aan ku bilowno mowduucan. Hoos ka eeg shaxda nuxurka
Qorsheeyaha Maaliyadda vs La-taliyaha: Waa ayo La-taliyaha Maaliyadda?
La-taliyaha Maaliyadda vs La-taliyaha Maaliyadda: Waa maxay doorarka La-taliyaha Maaliyadeed?
Waa kuma Qorsheeyaha Maaliyadeed?
Waa maxay doorarka Qorsheeyaha Maaliyadeed?
Qorsheeyaha Maaliyadda vs La-taliyaha Maaliyadda: Waa maxay faraqa u dhexeeya?
Qorsheeyaha Maaliyadda vs La-taliyaha: Keebaa kuu fiican?
Qorsheeyaha Maaliyadda Vs Mushaharka Lataliyaha Maaliyadda
Lacag ku salaysan
Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo ee ku saabsan lataliyaha Maaliyadda vs qorsheeye maaliyadeed
Sideen ku heli karaa lataliye dhaqaale?
Maxaan ugu baahanahay lataliye dhaqaale?
Qorshayaasha maaliyadeed iyo la taliyayaasha maaliyadeed ma isku mid baa?
Sidee bay lataliyayaasha maaliyadeed u sameeyaan lacag?
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in la helo shahaado lataliye maaliyadeed?
Maxaan ugu baahanahay qorsheeye maaliyadeed?
Qorshayaasha maaliyadeed iyo la-taliyayaasha maaliyadeed ma leeyihiin kharash adeeg oo gaar ah?
La-taliyaha maaliyadeed waa xirfadle maaliyadeed oo ku haga macaamiisha maalgashigooda, maamulka lacagta, iyo hantidooda.
Qof kastaa wuxuu isku magacaabi karaa lataliye dhaqaale laakiin farqiga u dhexeeya dadka noocaas ah iyo khabiirada dhabta ah ee goobta ayaa ah shahaadada xirfadeed ee ay haystaan.
La-taliyaha maaliyadeed waxa kale oo loo tixgalin karaa inuu yahay La-taliye Maaliyadeed Chartered (ChFC), maamulaha faylalka, la-taliyaha hantida, maareeyaha maalgashiga/hantida, iyo dullaal.
La-taliyayaasha dhaqaale ee khabiirka ah waxay maraan habab tababar oo adag waana inay gudbaan imtixaannada loo baahan yahay si loo helo shati.
Wadamada sida Mareykanka ee Ameerika, waxaa looga baahan doonaa inay iska diwaan geliyaan Guddiga Sarifka Ammaanka ee Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, tan waxaa lagu go'aamiyaa nooca iyo tirada hantida ay maamulaan.
Tani waa hal maqaal oo aad u baahan tahay inaad akhrido: SIDEE LOO BILAABAA GANACSIGA LATALIYE DHAQAALE
Marka loo eego Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha ee Mareykanka (BLS), doorarka lataliyaha maaliyadeed waa sida soo socota:
La-taliyayaasha maaliyadeed waxay la xiriiraan macaamiishooda wax ku saabsan fursadaha maalgashiga iyo sidoo kale khataraha ku lug leh maalgelinta ay bilaabayaan.
Waxay si joogto ah u sameeyaan cilmi-baaris ku saabsan fursadaha maalgashi ee la heli karo.
Waxay ku taliyaan maalgashiyo gaar ah oo ku habboon yoolalka maaliyadeed ee macaamiisha.
Kala talinta macaamiisha maalgelinta ku habboon yoolalka maaliyadeed.
Si joogto ah u hubi koontooyinka macaamiishooda oo samee hagaajin hadba baahida macaamiisha.
Doorka ugu muhiimsan ee lataliyaha maaliyadeed waa inuu hubiyo maalgalinta macaamiishooda oo uu si joogto ah u siiyo warbixinnada maalgashiga maaliyadeed macaamiishooda.
Waxay la kulmaan macaamiishooda waqti ka waqti si ay ugala hadlaan farsamooyinka maalgashiga ee khuseeya xaaladda suuqa maaliyadeed ama isbeddelka maaliyadeed ee macmiilka.
XIDHIIDHKA: 15 Qalab Wadashaqaynta Kooxda Xorta ah ee 2022 | Helitaanka waqtiga dhabta ah
Qorsheeyaha maaliyadeed waa xirfadle la shaqeeya macaamiisha si uu uga caawiyo inay qorsheeyaan oo ay gaaraan noocyo gaar ah oo ah yoolalka maaliyadeed.
Qorshayaashan maaliyadeed waxa ka mid ah qorshayaasha hawlgabka, qorshayaasha caymiska, cashuuraha, iwm.
Qorsheeyayaasha maaliyadeed ee haysta shahaadada Qorsheeyaha Maaliyadeed ee Shahaadaysan (CFP) waa kuwa loo aqoonsaday inay yihiin xirfadlayaal goobta jooga.
Qorsheeyayaasha maaliyadeed waxay la shaqeeyaan macaamiishooda noloshooda guud ee dhaqaalaha waxayna ka caawiyaan inay qorsheeyaan oo u maamulaan dhaqaalahooda si waafaqsan yoolal gaar ah.
Hoos waxaa ah doorarka qorsheeye maaliyadeed;
Qorsheeyayaasha maaliyadeed ee shahaadaysan waxay u adeegaan sidii qorsheeyaal maaliyadeed iyo la-taliyayaal maaliyadeed labadaba macaamiishooda.
Waxay bixiyaan adeegyada maaraynta hantida iyo qorshayaasha maaliyadeed sida qorshayaasha hawlgabka, qorshayaasha caymiska, cashuuraha, iwm macaamiishooda.
Waxay si dhow ula shaqeeyaan macaamiisha si ay u qorsheeyaan dhacdooyinka waaweyn ee noloshooda. Dhacdooyinka noocaan ah waxaa ka mid ah hawlgab, waxbarasho, aroos, iwm.
La soco maalgalinta macaamiishooda si loo hubiyo inay ku haboon tahay yoolalkooda maaliyadeed iyo miisaaniyadooda.
U qiimee xaaladda maaliyadeed ee macaamiishooda hab dhammaystiran.
Hadda oo aad fahantay doorarka la taliyaha maaliyadda vs qorsheeye maaliyadeed, iska hubi 20-ka Lataliye Maaliyadeed ee ugu Fiican 2022
Qorsheeyayaasha maaliyadeed waa khabiiro ka caawiya shakhsiyaadka ama shirkadaha si ay u abuuraan istaraatiijiyad ay ku gaaraan yoolalkooda fog. Waxay ka iman karaan asal ahaan sida dillaaliinta caymiska, xisaabiyeyaasha, iwm.
Qorsheeyaha maaliyadeed wuxuu kaa caawinayaa inaad qorshayso miisaaniyadaada, maalgelinta, hawlgabka, iyo kaydintaada. Shahaadadooda waxay ka timid Chartered Financial Analyst (CFA), La-taliyaha Maaliyadda ee Chartered (ChFC), Qorsheeyaha Maaliyadeed ee Shahaadaysan (CFP), ama urur kasta oo kale.
Shahaadooyinkani waxay muujinayaan in qorsheeye maaliyadeed uu soo maray waayo-aragnimadii loo baahnaa oo uu haysto shahaado lagama maarmaan ah oo u qalma inuu yahay qorsheeye maaliyadeed.
La-taliyaha maaliyadeed dhanka kale waa xirfadle diiradda saaraya kaalmaynta shakhsiyaadka ama hay'adaha maaraynta iyo samaynta go'aannada maalgelintooda, caymiska, cashuurta, kaydka, ama maalgelintooda.
Shaqada lataliyaha maaliyadeed waxay la mid tahay tan maareeyaha hantida iyo lataliyaha oo la isku daray.
Qorsheeyaha maaliyadeed iyo lataliye waa shaqooyin xirfad leh oo kaa caawinaya waxyaabo kala duwan sida maalgashiga, hawlgabka, kaydinta, iwm.
Marka ay timaado baaxadda shaqadooda, lataliyaha maaliyadeed waa mid ballaaran oo guud halka qorsheeye maaliyadeed uu yahay mid faahfaahsan oo dhamaystiran.
Marka ay timaado shahaado siinta, lataliyaha maaliyadeed wuxuu u baahan yahay liisan taxane ah halka qorsheeye maaliyadeed uu u baahan yahay shahaado qorsheeye shahaado leh.
Qorshayaasha maaliyadeed iyo la-taliyayaasha maaliyadeed labaduba waxay wax ka qabtaan dhibaatooyinka maaliyadeed, laakiin ogaanshaha kan adiga kugu habboon waxay ku xidhan tahay nooca baahida dhaqaale ee aad haysato.
Markaa, ka hor inta aanad ka fikirin inaad la xidhiidho qorsheeye maaliyadeed ama la-taliyaha maaliyadeed, hubi inaad ogaato baahidaada dhaqaale.
Tani waxay ku hagi doontaa inaad doorato midka kuugu habboon. Baaxadda shaqada ee qorsheeye maaliyadeed ayaa ka ballaaran kan lataliyaha maaliyadeed.
XIDHIIDHKA: 10 -ka Duuliye ee Diyaaradaha Diyaaradaha ugu Mushaharka Badan | 2022
Halka qorsheeye maaliyadeed uu diiradda saaro guud ahaan noloshaada maaliyadeed oo uu u diyaariyo qorshooyin maaliyadeed si uu si istiraatiji ah kaaga caawiyo inaad gaarto yoolalkaaga fog iyo kuwa dhow, caymiska, iwm.
Maadaama qof kasta oo leh nooc kasta oo asal waxbarasho ah (oo la xidhiidha ama aan la xidhiidhin maaliyadda) uu si fudud isu qori karo qorsheeyaal maaliyadeed, waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad doorato adiga oo ku saleysan shahaado.
Waxa jira ururo diiwaan gashan oo si xirfadaysan u tababara qorshayaasha maaliyadeed oo siiya shahaadooyin si ay si xirfadaysan ugu shaqeeyaan qorsheeyaal maaliyadeed.
Tusaale ururkan oo kale waa Board of Standards Planner Financial Certified. Shakhsiyaadka hela tababbarka ururkani waxa ay helayaan shahaado u ogolaanaysa inay ku shaqeeyaan xirfadlayaal maaliyadeed.
Shakhsiyaadka haysta shahaadada Qorsheeyaha Maaliyadeed ee Shahaadaysan ayaa si aad ah loogu aqoonsan yahay qorsheeyaal maaliyadeed oo xirfad leh maadaama ay soo mareen imtixaanno adag iyo tababar xirfadeed si ay u helaan shahaadadaas.
Dhanka kale, haddii baahidaada dhaqaale ay u baahan tahay waji guud oo dhaqaalahaaga ah, waa inaad qortaa qorsheeye maaliyadeed halkii aad ka qaadan lahayd lataliye maaliyadeed.
Qorsheeyaha maaliyadeed waxa uu wax walba ka arki doonaa dhanka guud waxa uuna dajin doonaa qorshooyin maaliyadeed si uu kaaga caawiyo in aad gaarto natiijada maaliyadeed ee aad rabto.
Waxaad waydiisan kartaa qoyska, asxaabta, iyo asxaabta inay kula taliyaan qorsheeye maaliyadeed.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la sameeyo cilmi-baaris online ka hor inta aan la shaqaaleysiin.
Waa inaad marka hore ogaataa kharashka shaqaaleysiinta qorsheeye maaliyadeed ama lataliye maaliyadeed ka hor inta aanad shaqaale qaadan. Ogaanshaha qiimaha aad ku shaqaaleysiin karto waa lama huraan ka hor shaqaaleysiinta.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirto kharash go'an oo loogu talagalay shaqaaleysiinta adeegyada qorsheeye maaliyadeed ama lataliyaha maaliyadeed, laakiin haddii aad u baahan doonto adeegyadooda maaliyadeed muddada dheer ama haddii qorsheeeyaha maaliyadeed ama lataliyaha maaliyadeed inta badan la magdhabo. Waxaa laga yaabaa inay qaali tahay.
Intee ayuu sameeyaa lataliyaha maaliyadeed? waxaa laga yaabaa inaad is weydiiso. Hagaag, ma jirto qaddar gaar ah oo uu sameeyo la-taliyaha maaliyadeed, waxay dhammaan ku xiran tahay jadwalka adeegyada macaamiisha.
Dhanka kale, waxaa jira saddex hab oo ay la-taliyayaasha maaliyadeed ku helaan lacag-bixinta laakiin hal hab oo keliya ayaa inta badan fudud in la isticmaalo.
Hababkani waa: lacag-ku-salaysan, ujro-kaliya, iyo komishanka.
Habkan, waxay ku helaan mushaharka dakhliga ay ka helaan adeegyada ay qabtaan iyo komishanka ay ka helaan badeecadaha maaliyadeed ee ay iibiyaan.
Halkan, lataliyayaasha maaliyadeed waxay helayaan mushahar iyadoo loo eegayo adeegyada ay qabtaan.
Qaybtan la taliyayaasha maaliyadeed waxay iibiyaan alaabtooda iyo adeegyadooda iyagoo u maraya hay'ad kale waxayna kasbadaan komishan iibka ay sameeyaan.
Qaar badan oo ka mid ah qorshayaasha maaliyadeed iyo la-taliyayaasha maaliyadeed ee bixiya adeegyada muddada-dheer waxay macaamiishooda ka qaadaan si waafaqsan hantida ay daryeelayaan.
Iyada oo ku xidhan nooca qorshaha maaliyadeed, qaar ka mid ah qorshayaasha maaliyadeed iyo qiimayaasha la taliyayaasha maaliyadeed waxay u dhexayn karaan inta u dhaxaysa $1,500 iyo $2,500.
Haddii ay tahay qorshe saacadle ah, waxaad ku dallaci kartaa inta u dhaxaysa $300 ilaa $500, haddii ay dhacdo inay bixiyaan adeegyo maaliyadeed oo wakhti dheer ah, waxaad ku dallaci kartaa boqolkiiba hantidaada maamulkooda.
Arag sidoo kale: La-taliyaha Maaliyadda vs Maareeyaha Dhaqaalaha: Dulmar, Farqiga, iyo Waxyaallaha la mid ah
Waxaad ka heli kartaa lataliye maaliyadeed adiga oo waydiinaya talooyinka qoyska iyo asxaabta, internetka, ama talooyinka xirfadlayaasha. Taas ka dib, waa inaad ka samaysaa lataliyaha su'aalo ku saabsan khibradiisa, iyo shahaadooyinkiisa xirfadeed. Waqti ka dib, lataliyaha maaliyadeed wuxuu xitaa noqon karaa saaxiibo qoyskaaga oo wuxuu rabi lahaa inuu ku lug yeesho go'aamada maaliyadeed.
Waxaad u baahan tahay la-taliye maaliyadeed si uu kaaga caawiyo maalgelintaada iyo maamulka hantidaada. Xirfad-yaqaanka maaliyadeed ee ay ka go'an tahay inuu gaaro yoolalkaaga maaliyadeed ayaa kaa caawin doona inaad dhisto qorshahaaga maaliyadeed, ku siiyo talo-yaqaannimo oo ku saabsan hantidaada iyo hantidaada, maareyso maalgashigaaga iyo hantidaada sidoo kale.
Halkaa waa halka ay ku kala duwan yihiin qorsheeye maaliyadeed vs lataliye. Haddaba, lataliyaha maaliyadeed waa magac ballaadhan oo ka kooban qorshayaasha maaliyadeed, maamulayaasha maalgashiga, iwm. Dhammaan qorshayaasha maaliyadeed ee shahaadaysan waa la-taliyayaal maaliyadeed laakiin dhammaan la-taliyayaasha maaliyadeed maaha kuwo qorsheeyaal maaliyadeed ah.
Caadi ahaan waa la magdhabaa ama waxay macaamiishooda ka qaadaan lacag. Waxay noqon kartaa saacadle, sanadle, ama qiime siman. La-taliyayaasha iibiya badeecadaha iyo adeegyada maaliyadeed ee shirkadaha kale waxay sidoo kale ka helaan guddi.
Waxay qaadataa sagaal bilood in la helo shahaado lataliye maaliyadeed. Taas ka dib, waxaad bilaabi kartaa inaad si xirfad leh ugu shaqeyso lataliye dhaqaale.
Waxaad u baahan tahay qorsheeye maaliyadeed si uu kaaga caawiyo samaynta go'aannada maaliyadeed ee muddada-gaaban iyo kuwa fog. Xirfadlayaashani waxay kaa caawinayaan qorshayaasha maalgashiga iyo maamulka maaliyadda guud.
Kharashka adeegga ee ay bixiyaan xirfadlayaashan maaliyaddu way kala duwan yihiin iyadoo ku xidhan adeegyada ay qabtaan.
Ka dib markaad akhrido kala duwanaanshaha qorsheeye maaliyadeed vs la taliyaha, waxaad hadda ogaan kartaa midka kuugu habboon iyadoo ku xiran baahidaada dhaqaale. Kadib markaad hesho talooyinka lataliyaha maaliyadeed ama qorsheeye maaliyadeed si aad u shaqaaleysiiso, samee dhowr ka mid ah.
Jadwal u samee wareysi mid kasta oo iyaga ka mid ah, weydii dhowr su'aalood oo ku saabsan shahaadooyinkooda, khibradahooda, qaabka kharashka, adeegyadooda iyo xeeladaha ay isticmaalaan, nooca macaamiisha ay la shaqeeyaan, iyo tixraacyo si loo hubiyo inay ku kalsoon yihiin inay la shaqeeyaan .
Ka dib markaad kuwaas oo dhan sameyso, waxaad hadda dooran kartaa mid ku habboon waxaad rabto. Haddii doorashadaada koowaad ay kugu habboon tahay, ka dibna fiican. Laakin haddii kale, waxaad u ogolaan kartaa qofka inuu baxo oo aad shaqaaleysiiso qof kale. La-taliye maaliyadeed oo weyn iyo lammaane maaliyadeed ayaa ah mas'uul aad u sarreeya, hufan, oo la aamini karo.
Inta u dhaxaysa qorsheeye maaliyadeed iyo lataliyaha maaliyadeed, mid iyaga ka mid ah waa mid guud halka kan kalena uu diiradda saarayo meel gaar ah. Lataliyaha maaliyadeed waa magac ballaadhan oo daboolaya qorshayaasha maaliyadeed, maamulayaasha maalgashiga, iwm.
20-ka Lataliye Maaliyadeed ee ugu Fiican 2022
Giriiggii hore, intii lagu jiray Renaissance, imtixaan cilmiyeed ayaa la sameeyay oo loo adeegsaday in lagu go'aamiyo kuwa ugu quruxda badan…